Siday ku dhacday in jiil dhan ay qabatiimaan isticmaalka sharoobada qufaca? | Bosaso Media News
Siday ku dhacday in jiil dhan ay qabatiimaan isticmaalka sharoobada qufaca?
Weriyaha BBC-da Ruona Meyer walaalkeeda ka yar ayaa markii uu qabatiimay dawada sharoobadda qufaca ayaa waxay billowday inay baaritaan ku samayso raga dawadan sida sharci darrada ah ugu iibiya wadooyinka caasimada Lagos.
Baaritaankeeda ayaa ku ogaatay jiritaanka koox dambiilayaal qarsoon oo baabi’inaya nolosha da’ yarta Galbeedka Africa.
”Waxaa jira caruur iskuulaadka dhigta oo marka la dhadhansiiya sharoobadan dalbanaya in loo kordhiyo ” waxaa sidaa yiri Junaid Hassan.
Weriyaha ayaa sheegtay in markii warkaasi loo sheegayay ay murugo ku abuurtay.
Weriyaha ayaa horay ula kulantay dhalinyaro badan oo reer Nigeria ah la qabatiimay isticmaalka sharoobada qufaca loogu talogalay oo ay maandooriye ahaan u isticmaalaan.
Gabar 14 jir ah oo ka soo jeeda Lagos ayaa waalidkeed waxaysan hubin sida ay u caawin karraan. Nin kale oo dhalinyaro ah oo isna gobolka Kano ka soo jeeda ayaa lagu xirxiray silsilad goob dadka lagu dhaqan celiyo. Waxuumudo bilooyin ah sharoobadan qufaca la cabayay saaxiibadiis.
Image captionDadka la qabsaday isticmaalka sharoobada qufaca ayaa la katiinadeeyaa si aysan u hellin asxaabta kale ee sharoobada isticmaala
Weriyaha baaritaankan samaysay ayaa walaalkeed ka yar waxuu isticmaalaa sharoobadan qufaca ee daroogo ahaanta loo isticmaalo ka dib markii aabahood la dilay.. sharoobadan waxay u dhadhantaa sida cabitaanka Strewberiga loo yaqaano.
Dadka reer Nigeria ee sharoobada isticmaala waxay doonayaan inay isku dhaafiyaan walwalka iyo murugada haysta si ay mirqaan uga helaan. kuwo ka ganacsada waxay ku iibiyaan goobaha lagu tunto ee muusiga iyo wadooyinkaba. dhalinyarada ayaa sharoobadan ku dara cabitaano kale marka ay isticmaalayaan ama waxay toos u cabaan sharoobada oo kaliya.
Xasan oo loo yaqaano baba Ibeji waxa uu ka shaqeeyaa shirikada dawada ee Bioraj oo ruqsad u haysata soosaarka sharoobada qufaca. Shirikadan ayaa ah tan ugu weyn ee sharoobadan u iibgaysa waqooyiga Nigeria.
Ninkan ayaa ka mid ah shaqaalaha shirikad dawada iibisa oo BBC-du ay ka duubtay filim qarsoodi ah iyagoo markaasi samaynaya ganacsigan bilaa sharciga ah dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Dawadan in la cabo ama la warshadeeyo ma ahan sharci darro ee waxaa mamnuuc ah in dawadan dadka laga iibiyo iyadoon la wadan warqad dhaqtar uu soo qoray amaba ay iibiyaan farmashiyooyin aan ruqsad haysan.
Markii aan Shirikada Bioraj aan u sheegnay inaan hayno cadaymo muujinaya in Mr Xasan uu ku shaqo leeyahay howshan sharoobada sida sharci darrada ah suuqa loo geliyay waxay noo sheegeen in shirikadooda ay si sharci ah u shaqayso.
Sida dawooyinka kale ayay sharoobadan Codeine-ka loo yaqaano waxay bi’isaa qufaca. Balse waxay keentaa mirqaan ama istiin uu qofku helayo. waxay sidoo kale sharoobadan oo aad loo qaato keentaa saamayn maskaxda iyo jirkaba ku yimaada.
Xarunta dhaqan celinta ee Dorayi waxaa ku nool wiil dhalinyaro ah oo sheegay in sharoobadan uu aad u isticmaalay. jilbaha ayuu ku fadhiyay lugahana waxaa uga xirnaa katiinad geed lagu xiray gacmihiisa ayuu dhulka ku garaacayay. Todobaadan iyo labo saacadood ka hor ayaa waddooyinka laga soo qabtay.
”Weli waxaa jirkiisa ka sii baxaya sharoobadii maandooriska ” sidaas waxaa yiri Sani Usaini oo madax ka ah xarunta dhaqan-celinta
Baaxada dhibaatada dawada sharoobada Codeine-ka
Dawada Codeina-ka waa xanuun baabi’iye balse haddii la iska badiyo waxay dhaawacdaa xubnaha qofka
Dawada Codeine-ka waxaa caadiyan lagu barxaa cabitaan kale waxaana badanaa isticmaala ardayda
Asalka dawada Codeine-ka waa la soo dhoofiyaa, balse sharoobada waxaa ku farsameeya Nigeria in ka badan 20 shirikadood
Hay’adda la dagaalanka maandooriyaha ayaa la dagaalanta faafinta maandooriyahan. Howgalkii ugu dambeeyey waxaa lagu soo qabtay 24,000 oo kaartoon oo saarnaa hal gaari oo kaliya magaalada Katsina.
Laqabsiga sharoobadan Codine-ka ayaa dhib weyn ku haya Afrika oo dhan sida Kenya, Ghana, Niger iyo Chad
Sanadkii 2016-kii dalka Hindiya waxa uu mamnuucay dawadan Codeina-ka.
Marka laga soo tago in dawadani ay dhaawacdo keliyaha, waxay sidoo kale saamayn ku yeellataa maskaxda waxayna keentaa khalad-iskadhaadhicin, sallow iyo waliba jahwareer maskaxeed. Kuwo badan oo dawadan ay jirkooda gashay oo xerada dhaqan celinta ku jira ayaa rabshado sameeya taasoo keentay in la katiinadeeyo.
”Sariirta ma joogi karro wuuna jabiyay sariirta, waxuu sidoo kale jabiyay daaqadaha isagana wuu is dhaawacay” Mr Usaini ayaa sidaas u sheegay gabadha weriyaha ah oo hortaagan qof kaloo katiinadaysan.
Shaqaalaha shirikadaha ee suuqa madoow sida sharcidarada ah ugu iibiya waa ay ogyihiin dhiibatada dawadan ay leedahay. Waxaana shaqaalahaasi ka mid ah Chukwunonye Madubuike oo ah horumariye ganacsi oo ka shaqeeya shirikada Emzor kaasoo weriyaha ka iibiyay 60 dhalo oo sharoobada Codeine-ka ah, wuxuuna uga iibiyay hotel ku yaalla Lagos.
Image captionShirikada Emzor ayaa sheegtay inay baaritaan samaynayso
”Marka qofku uu dawadam qabatimo uuna qofku u baahan yahay waxaasi uu la qabsaday, qiimaha shaygaasi dhib kuma ahan” ayuu yiri, waxuuna sii raaciyay ” Waa ganacsi aan ogahay xitaa haddii aan hayo hal milyam oo kaartoon aan ku gadi karro hal isbuuc gudihiis.”
‘Waxay gaartay meel walba’
Gobolka Kano ee waqooyiga Nigeria kooxaha la dagaalama maandooriyaha ayaa sameeya howgalo ay ku burburinayaan sharoobada Codeine-ka ee wadooyinka lagu gado.
Saraakiisha ayaa tusay kooxda BBC-da ee baaristan sameysay labo tan oo sharoobooyinkan ah waxaana soo qabtay ciidanka ka hortaga daroogada. Waxaa kaloo ay na tuseen hub ay isticmaalaan kooxaha gaangiistarada ah si ay u ilaaliyaan ganacsigooda, waxaa ka mid ah hubkaasi mindiyo iyo faasas ay kula dagaalamaan ciidanka dowladda.
Image captionCiidanka ka hortaga daroogada oo weriyaha BBC-da tusaya hub laga soo qabtay kooxaha daroogada.
Balse ciidanka kahortaga daroogada ee gobolka Kano ayaa ayaa dagaal kula jira shabakad weyn oo dawadan iibiya.
Aqalka Sare ee Nigeria ayaa qiyaasaya in ilaa sadax milyan oo dhalooyin sharoobadan ah la iibiyo maalin walba kaliya gobolada kano iuo Jigawa.
”Xitaa maanan hellin boqolkiiba tobon dawada suuqa ku jirta” waxaa sidaas yiri HamzaUmar taliyaha ciidanka ka hortaga Maandooriya ee gobolka Kano.
Waxuu intaasi raaciyay taliyuhu in dawadan ay isticmaalaan dad kala duwan sida, Tujaarta, dadka saboolka ah, aqoonyahanka, kuwa aan wax baran kuwa tuugsada iyo xitaa caruurta iskuulaadka hoose dhigta.
Mr Usaini oo ku sugan xarunta dhaqan celinta, ayaa ka waramaya baaxada iyo tirada dadka loo keeno in la xanaaneeyo ee dawadan Codeina-ka isticmaala. Kiisas labo ilaa sadax ah ayaa isbuuciiba la keenaa. Balse Weriyaha waxa ay aragtay todobo, sideed ilaa 10 qof oo isbuucii la keeno xaruntaasi.
Qol aan dariishado lahayn ayaa waxaa ku jirta mid ka mid ah caruurta. Waa gabar 16 jir ah oo xijaab midabkiisu yahay huruud gashan taasoo noo sheegtay inay cabista dawadan ka baratay saaxiibkeed ayna cabi jirtay iskuulka markay ka soo baxdo.
Fariintan fudud ayay u diraysaa dhalinyarada reer Nigeria ee damacsan isticmaalka dawadan; ”Waxaan kula talin lahaa inay isticmaalin dawadan hadiiba aysan hadda billaabin.Iisticmaalka dawadan waxay burburinaysaa noloshooda”
Warbixintan waa midii ugu horaysay ee ay samayso BBC qaybteeda baaritaanada Africa ee Africa Eye.